Nagarik News - नेपालमा सर्पदंशको भ्याक्सिन अभाव
नेपालमा सर्पदंशको भ्याक्सिन अभाव
28 Mar 2014 | 07:36am
शुक्रबार १४ चैत्र, २०७०
काठमाडौं-भारतले अदालती आदेश पालना गर्दै सर्पले टोकेका बिरामीको ज्यान जोगाउन दिइने खोप उत्पादन कम मात्र गरेको छैन, आफैंलाई नपुग्ने भन्दै देशबाहिर बेचबिखनमा प्रतिबन्धै लगाएको छ।
एक वर्षअघिको यो प्रतिबन्धको सिधा असर भने नेपालमाथि परेको छ।
नेपालमा पाइने विषालु प्रजातिका सर्पदंशको टोकाइमा भारतीय कम्पनीका खोपले मात्र काम गर्छ। भारतले बेच्न नदिएपछि अघिल्लै वर्षदेखि नेपालमा अभाव चर्किएको यो खोपको वैकल्पिक व्यवस्थापन स्वास्थ्य विभागमाथि चुनौती बनेको छ।
‘गत वर्ष नै खोपको हाहाकार भएर केही बिरामीको अस्पताल आइपुगेर पनि उपचार नपाई मृत्यु भएको थियो,' इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले नागरिकसँग भने, ‘नेपालमा यो भ्याक्सिनको स्टक अत्यन्त कम छ, आवश्यक ठाउँमा पठाउँदा खेपमा सकिन्छ।'
सर्पदंशमा जीवनरक्षाका लागि नभइनहुने (लाइफ सेभिङ ड्रग) सर्पदंशको भ्याक्सिन नेपालमा प्रत्येक वर्ष न्यूनतम ३० देखि अधिकतम ४० हजार भाइल आवश्यक पर्छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार स्टक भने करिब ६ हजार भाइलमात्रै छ।
भारतीय कम्पनीमा मात्रै निर्भर रहेको यो भ्याक्सिन भारत सरकारले निर्यात रोक्दा नेपालमा गत वर्षदेखि नै अभाव सुरु भएको थियो। नेपालमा विभिन्न प्रजातिका सर्पको टोकाइका लागि मिल्ने भ्याक्सिन भारतीय कम्पनीले मात्रै उत्पादन गर्छन्।
स्टकले वैशाख र मध्यजेठसम्म पुगे पनि मूल सर्पदंशको बिरामी आउने मौसम भदौसम्म हाहाकार हुने डा. मरासिनीको आँकलन छ।
थप १६ हजार भाइल खरिदका लागि आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले यस वर्षका लागि टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ, भारतीय प्रतिबन्ध छलेर टेन्डर पारेका ठेकेदारले भ्याक्सिन ल्याउन सक्नेमा स्वास्थ्य अधिकारी नै निश्चिन्त छैनन्।
महाशाखाका अनुसार दुई वर्षअघि टेन्डर भएको ३० हजार भाइलमध्ये ८ हजार भाइल भ्याक्सिन ठेकेदारले अझै दिन सकेका छैनन्। ठेकेदारले दुई वर्षअघिको भ्याक्सिन दिन नसकेपछि ‘हस्पिटेक' नामक कम्पनीले गत वर्ष १२ लाख हर्जनासमेत तिरेको थियो।
गत वर्ष ४० हजार भाइल खरिद गर्न दुईपटक टेन्डर र एक वर्ष बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि नेपालमा भ्याक्सिन आयातका लागि अनुमति पाएका तीनमध्ये कुनै पनि कम्पनीले टेन्डर हालेनन्।
नेपालमा भ्याक्सिन हाहाकार बढेर मृत्युसमेत हुन थालेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले भारतीय बजारबाट आफैं खरिद गरेर नेपाल पठाएको थियो। अघिल्ला वर्ष टेन्डर पारेको कम्पनीले समेत कालो सूचीमा पर्ने त्रासले ‘घाटा खाएरै' भारतीय बजारमा खुला रुपमा भ्याक्सिन किनेर ल्याएको थियो। उक्त समूहले भारतीय बजारै पुगेर ०६९/७० को भन्दा दोब्बर मूल्यमा ५ हजार भाइल ल्याएको थियो।
भारतीय अदालतको फैसलाका आधारमा त्यहाँका कम्पनीले उत्पादन घटाउँदै लगेका छन्। त्यही कारण जनाउँदै भारतले अघिल्लो वर्षदेखि नै सर्पदंशको भ्याक्सिन निर्यातमा रोक लगाएको थियो।
‘भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आफैंलाई पुगेन भनेर भारतले निर्यात रोकेको छ,' डा. मरासिनीले भने, ‘गत वर्षदेखि नै यसको असर परिरहेको छ, यो वर्ष अझै धेरै क्षति होला भन्ने त्रास छ।'
सुरुमा सर्पको विष निकालेर इन्जेक्सनमार्फत घोडालाई दिने र घोडाको रगत निकालेर ‘प्रोसेसिङ' गरी सर्पदंशको भ्याक्सिन उत्पादन गरिन्छ। सर्पदंशको भ्याक्सिन भारतबाहेक इरान, साउदीलगायतले उत्पादन गरे पनि निश्चित प्रजातिको सर्पको टोकाइमा मात्र काम लाग्छ। नेपालमा पाइने प्रमुख विषालु सर्पमध्ये करेत, कोब्रा र भाइपर जुनसुकैको टोकाइमा काम लाग्ने मिक्स भ्याक्सिन भारतीय कम्पनीले मात्र उत्पादन गर्छन्।
नेपालमा जेठदेखि कात्तिकभित्र बढी भ्याक्सिन खपत हुन्छ। विषालु सर्पको प्रकृति हेरी एकजनालाई कम्तीमा १७ देखि २७ भाइल भ्याक्सिन आवश्यक पर्छ। प्रत्येक वर्ष चारदेखि पाँच हजार भाइल भ्याक्सिन खपत हुने जिल्लालाई अहिले २–३ सय भाइलमात्रै पठाइएको छ।
चरम संकटले भ्याक्सिनको मूल्य पनि अकासिएको छ। २०६८ मा प्रतिभाइल ४ सय रुपैयाँ हाराहारीमा किनिएको भ्याक्सिन गत वर्ष ११ सयमा पनि नपाइएकाले यस वर्ष झन् महँगिने विभागका अधिकारीको भनाइ छ।
पाँचै विकास क्षेत्रका मेडिकल स्टोरमार्फत देशभर ४२ वटा सर्पदंश उपचारकेन्द्रमा औषधि पठाउनुपर्छ। हाल केही दिनअघि ३ सय भाइल भरतपुर पठाइएको छ। अन्य केन्द्रबाट ठूलो माग आए पनि पठाइएको छैन।
डा. मरासिनीका अनुसार नेपालमै औषधि उत्पादन गर्ने सम्भवना भए पनि त्यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन। विषालु सर्प, घोडा र अन्य प्राविधिक जनशक्ति यहीँ उपलब्ध भएकाले अब हामी आफैं भ्याक्सिन उत्पादनबारे सोचिरहेका छौं,' उनले भने, ‘सुरुमा केही लगानी गरे गाह्रो छैन।'
नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब १५ हजार व्यक्ति सर्पदंशबाट पीडित हुन्छन्। तीमध्ये २६ जिल्लाका करिब ३ हजारले विषालु सर्पको टोकाइ बेहोर्नुपर्छ। तीमध्ये करिब १५ प्रतिशतको मृत्यु हुने गरेको छ। महाशाखाका जुनोटिक रोग नियन्त्रण अधिकृत बिहारी महतोका अनुसार वर्षा तथा गर्मीयाममा तराई क्षेत्रमा सर्पको टोकाइबाट मानिस तथा घरपालुवा जनावर बढी पीडित हुने गरेका छन्।
नेपालमा ७९ प्रजातिका सर्प पाइन्छ। तीमध्ये २१ प्रजाति विषालु हुन्छन्। करेत, गोमन र भाइपरको टोकाइ सबभन्दा खतरानक हुन्छ।
दीपक दाहालबाट थप
समुन्द्रछेउका रोग भित्रिए